Reer Cuba oo sagootiyey meydka hoggaamiyahoodii shuuciga ahaa Fidel Castro - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldReer Cuba oo sagootiyey meydka hoggaamiyahoodii shuuciga ahaa Fidel Castro
December 4, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Meydka Fidel Castro oo gaari lagu wado bartamaha magaalada Santiago oo lagu aasay . [Sawirka: AFP]
Santiago-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Cuba Raul Castro ayaa hoggaaminayay tacsida ugu dambeysay ee walaakiis Fidel Castro oo ka dhacday magaalada Santiago.
Tobonaan kun oo reer Cuba ah ayaa ka qeybgalay munaasabada, sidoo kale waxaa ka qeybgalay hoggaamiyaal caalamka ka kala yimid.
Raul Castro ayaa wacad ku maray inuu xoojin doono shuruucda hanti-dhowrka iyo ujeedooyinkii kacdoonka oo uu hoggaamiye ka ahaa Fidel, kaasoo geeriyooday asbuucii lasoo dhaafay isaga oo jirey 90-sanno.
Kumaan kun oo qof oo munaasabada sagootinta ah ka qeybgalayay ayaa ku qeylinayay “Cimri dheer Fidel, waanu kula jirnaa Fidel”.
Arday ka qeybgalaysay munaasabada sagootinta meydka hoggaamiyahoodii hore. [Sawirka: Reuters]
Hoggaamiyihii shuuciga ahaa Fidel Castro, ayaa xukumayay dalka Cuba muddo ku dhow 50-sanno, iyadoo 2008-dii uu walaakiis Raul Castro xilka kala wareegay kadib markii ay xaalad caafimaad daro lasoo deristay.